डिजिटल व्यवसाय कार्ड सिर्जना गर्नका लागि Apps अनुप्रयोगहरू - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / Business अनुप्रयोगहरू डिजिटल व्यापार कार्ड सिर्जना गर्नका लागि
एक डिजिटल व्यापार कार्ड तपाइँको नेटवर्क संग तपाइँको विवरण साझा गर्ने सबैभन्दा उन्नत तरीका हो। तपाइँको विद्यमान संग जडान स्थापित गर्न वा ग्राहकहरु यो फैशनेबल विवरण साझा विधि संगै हुनको लागी तपाइँ कसरी प्रविधिको प्रत्येक बिट को उपयोग को बारे मा अन्य व्यक्ति को लागी एक अंतर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
डिजिटल व्यापार कार्डहरू भन्न को लागी अर्को तरीका हो कि ठेगाना किताबहरु डिजिटल गएका छन्। गयो समय हो जब एक मैन्युअल रूप मा कसैको नम्बर बचत गर्न को लागी थियो। यो समय अगाडी बढ्न र कोड स्क्यान गर्न को लागी तपाइँको सीधा जानकारी सुरक्षित गर्न को लागी समय हो सम्पर्क सूची।
तेसैले, प्रवृत्ति संग प्राप्त गर्न को लागी र नेटवर्किंग को समय बचाउन को लागी, तपाइँको डिजिटल बनाउनुहोस् व्यापार कार्ड आज तल उल्लेखित अनुप्रयोगहरु संग।
डिजिटल बनाउने व्यापार कार्ड Camcard मा धेरै धेरै एक cakewalk समान छ।
यो एक सहज उपयोगकर्ता ईन्टरफेस छ र 15 विभिन्न भाषाहरूमा कार्ड स्क्यान गर्न सक्दछ।
यसले एकको सामाजिक मिडिया फिडबाट जानकारी आयात गर्ने थप लाभ पनि प्रदान गर्दछ।
एक पनि यो अनुप्रयोग प्रयोग गरी सम्पर्कहरूमा अनुस्मारकहरू र नोटहरू थप्न सक्दछ।
यसले फ्ल्यासमा बहु कार्डहरूबाट जानकारी बचत गर्न सक्दछ, यसको ब्याच स्क्यानिंग कार्यक्षमतालाई।
यो पनी एक विशिष्ट सुविधा, सचिव मोड छ, जो एक पेशेवर को सचिव लाई स्टोर गर्न को लागी अनुमति दिन्छ सम्पर्क उनीहरुको तर्फबाट जानकारी।
यो पनि अपडेट गर्दछ सम्पर्कको जानकारी यदि उनीहरु संगठन परिवर्तन वा भविष्य मा पदोन्नति प्राप्त।
क्यामकार्ड अनुप्रयोगले प्रयोगकर्ताको सबै जानकारीलाई क्लाउडमा भण्डारण गर्दछ र यसरी कुनै पनि उपकरणबाट यसलाई पहुँच गर्न सकिन्छ।
नि: शुल्क प्रयास गरेर सुरू गर्नुहोस् र यदि तपाईंलाई यो मनपर्दछ भने, तपाईंको आवश्यकता अनुसार टोली प्याकेज वा व्यापार प्याकेजमा स्विच गर्नुहोस्।
यसले तपाइँसँग डिजिटल व्यवसाय कार्ड विकास गर्न मद्दत गर्दछ, एक स्थिर शैली सहित।
यसले असाधारण साइबरसुरक्षा, सीआरएम प्लेटफार्म र एचआर प्रणाली दुबैको एकीकरण प्रदान गर्दछ।
स्वयं सेवा प्रशासक ड्यासबोर्ड सजीलै जो कोही द्वारा संचालित गर्न सकिन्छ र तपाइँ जान्दछन् कि कति प्रयोगकर्ताहरु लाई आफ्नो भ्रमण गरीयो सम्पर्क कार्डहरु। यसले तपाइँलाई एक दिन्छ विचार बुझ्न को लागी तपाइँको मार्केटि efforts प्रयासहरु कती टाढा सम्म पुग्यो।
विभिन्न ब्रान्डेड टेम्पलेट्स, छविहरु को एक किस्म संग, भिडियो, र सामाजिक मिडिया लिंक तपाइँको डिजिटल व्यापार कार्ड बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हाईस्टेक अनुप्रयोग भत्ताहरू बिक्री टोलीमा विस्तार गर्दछ आरओआई मेट्रिक्समा अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेर गतिविधि ट्र्याकि and र कार्डका विभिन्न गतिविधिहरूको डाटा भिजुअलाइजेशन जसले प्राप्तकर्ताहरूले गरेको सक्रियता, दृश्यहरू, सेयरहरू, र अधिक समावेश गर्दछ।
यसले तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू र अवस्थित सीआरएम प्लेटफर्महरूसँग एकीकृत गर्न सक्दछ सीसा पालनपोषण स्वचालित गर्न।
सक्रियता लि sharing्क साझेदारीको साथ, यसले समग्र कार्यबल क्षमता सुधार गर्दछ।
यदि अर्को व्यक्तिको अनुप्रयोग छैन भने पनि, तिनीहरूले अझै तपाईंको कार्डहरू प्राप्त गर्न सक्छन् जुन एक प्रभावी आधुनिक व्यापार कार्ड समाधान हो।
एक जीवनभरको लागि सधैंभरि निःशुल्क कार्ड योजनाको मजा लिन सक्दछ।
यो क्लाउडमा आधारित समाधान हो अनुकूलन टेम्प्लेटहरू, कर्मचारी जानकारी, ब्रान्डेड छवि, र अधिकको प्रयोग गरेर डिजिटल व्यापार कार्डहरू बनाउन।
नेतृत्व व्यवस्थापन, डाटा निकासी बाट, सम्पर्क आयात निर्यात, वास्तविक समय एनालिटिक्स, र in-app स्क्यानि,, र अधिक, यो अनुप्रयोग एक उत्कृष्ट CRM एकीकरण प्रदान गर्दछ।
प्लेटफर्म को क्लाइन्ट को आधार मा ग्राहक विवरण क्रमबद्ध गर्दछ सम्पर्क, कार्यहरु, विभागहरु, र अन्य।
यसले एक लीडर बोर्ड पनि समावेश गर्दछ जहाँ व्यवसाय प्रदर्शन र टोली सदस्यहरूको संलग्नता प्रदर्शित हुन्छ जुन प्रबन्धकहरूले उनीहरूलाई मूल्या to्कन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्।
यस अनुप्रयोगले डिजिटल व्यापार कार्ड साझा गर्न को लागी सामाजिक मीडिया, पाठ सन्देशहरु, ईमेलहरु, QR कोड, र अधिक जानकारी साझा गर्न अनुमति दिन्छ।
एक भर्चुअल व्यापार कार्ड जुन अनुकूलन डोमेनमा सुरू गर्न सकिन्छ यो महान अनुप्रयोगको सुविधाहरू मध्ये एक हो।
वेबपृष्ठको डिजाईनका लागि तपाईले डिजाइनर वा कोडर राख्नुपर्दैन किनकि यो सजिलै तपाई द्वारा डिजाइन गर्न सकिन्छ।
तपाईं यसलाई सामाजिक मिडियामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम थप्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको डिजिटल ब्यापार कार्डमा केवल एक लिंकको साथ तपाई आफ्नो लागि सबै मार्केटिंग गर्न सक्नुहुनेछ।
यसमा एक पनि समावेश छ ईमेल हस्ताक्षर कि तपाइँ आफ्नो अनुसार क्यूरेट गर्न सक्नुहुन्छ विचार र नेतृत्व कब्जा संग एक स्पटलाइट बटन, नियुक्ति तालिका, र तपाइँको वेबसाइट विकल्प को लागी सीधा।
समर्थक योजना सुविधाहरूले तपाईंलाई एक डोमेनसँग जडान गर्न, Google विश्लेषणमा तपाईंको प्रगति हेर्न, र खोजी परिणामहरू अनुकूलित गर्न पहुँच प्रदान गर्दछ।
तपाईं तिनीहरूको प्लेटफर्ममा नि: शुल्क सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र राम्रो योजनामा ​​अपग्रेड गर्न सक्नुहुनेछ एकचोटि तपाईंले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो।
ABBYY व्यवसाय कार्ड रिडर
यो विविध अनुप्रयोग को उपयोग गरेर, एक भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क 25 भाषाहरु मा कार्ड बाट जानकारी।
यो पुरस्कार विजेता OCR टेक्नोलोजी को उपयोग गर्दछ कि सही रूप मा सबै लाई मान्यता दिन्छ सम्पर्क नाम, ईमेल ठेगाना, फोन नम्बर, संगठन, र अधिक जस्तै जानकारी।
यसले डिजिटल कार्डलाई एक तरीकाले स्क्यान गर्दछ कि यसले अनावश्यक पृष्ठभूमि स्वचालित रूपमा फसल गर्दछ।
यदि कुनै डाटा अनुप्रयोगबाट पहिचान गरीएको छ भने, यो निलोमा हाइलाइट गरिएको छ र म्यानुअली सुधार गरिएको छ।
देश कोड र एक्सटेन्सन स्वचालित रूपमा भरिएका छन्, र कुनै पनि typos मान्यता प्राप्त जानकारी मा स्वचालित रूपले सुधार गरीन्छ।
ABBYY व्यवसाय कार्ड रिडरले यसको मजबूत सिnch्क्रोनाइजेसन फ्रेमवर्कलाई दिइएका स्मार्टफोन बीचमा डेटा ब्याक अप गर्दछ।
एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ फिर्ता डाटा म्यानुअली वा स्वचालित रूपमा, र सम्पर्कहरू मान्यता प्राप्त गरियो VCard वा JPEG फाईलहरूको रूपमा ईमेल मार्फत सेयर गरिएको।
यो अनुप्रयोग बिक्री विकास ड्राइभ गर्न र तपाइँको ग्राहकको अन्तर्क्रिया ट्रयाक राख्न CRM एकीकरणको साथ प्रयोग गर्न उत्तम छ।
यसले सीआरएम प्रणालीहरूमा सम्पर्क जानकारी सुरक्षित गर्दछ, यसैले उत्तम प्रदान गर्दछ मदत र यसलाई बचत गर्ने म्यानुअल कार्यलाई कम गर्दै।
एक व्यक्ति व्यक्तिगत प्रयोगको लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछ, तर यसको अत्यन्त फाइदाको लागि प्रयोग गर्न, यो उद्यमहरूमा प्रयोगको लागि उत्तम उपयुक्त हो।
असीमित व्यापार कार्ड स्क्यानको साथ, सम्पर्क जानकारी अवस्थित र नयाँमा भण्डारण गरिन्छ।
यदि स्वचालित मान्यता असफल हुन्छ वा कुनै पनि गलत छ मामला, एक व्यक्ति म्यानुअल ट्रान्सक्रिप्शन को लागी कार्ड बुझाउन सक्नुहुन्छ।
एक यसलाई नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्दछ, तर प्रीमियम योजनामा ​​दुई म्यानुअल ट्रान्सक्रिप्शनहरू खरीदको लागि अधिक उपलब्ध सहित
विभिन्न CRM प्रणालीहरू जस्तै शुगरसीआरएम र सेल्सफोर्स स्क्यानबिजकार्डहरूले समर्थन गर्दछ।
CSV ढाँचा सम्पर्कहरू यस प्लेटफर्ममा निर्यात गर्न सकिन्छ, र Evernote जस्तो तेस्रो पक्ष पनि यसमा समर्थित छ।
दुई पक्षीय ब्यापार कार्डहरू पनि यो अनुप्रयोग द्वारा स्क्यान गर्न सकिन्छ र तपाइँलाई तपाइँको सम्पर्कहरूमा फर्वार्ड गर्न दिनुहोस्।
यो 3D दृश्य खोज र अनुप्रयोग मा स्क्यान बिजनेस कार्ड को क्रमबद्ध गर्न को लागी धेरै सरल अनुमति दिन्छ।
यी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरु हो कि तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु को मिलान पछि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाइँको निर्णय हो कि अनुप्रयोग को तैनाती को क्षेत्र को आधार मा प्रीमियम योजनाहरु को मुक्त संस्करण को उपयोग गर्न को लागी। न्यायाधीश प्रयोग मा सजीलो, सटीकता स्तर, बिल्ट-इन सुविधाहरु, उपकरण क्षमता, र अन्य सुविधाहरु जस्ता कारकहरुमा तपाइँ एक निर्णय गर्नु अघि।
त्यसो भए कुनै विवरण बिना नै डिजिटलमा जानुहोस् र आफ्नो डिजिटल व्यापार कार्ड बनाउनुहोस्!
राजेश भिमानी यसका संस्थापक हुन् स्कायनेट टेक्नोलोजीहरू, वेबसाइट डिजाइन र विकास एजेन्सी। उनीसँग टेक्नोलोजी र मार्केटिङ उद्योगमा २० वर्षको अनुभव छ। जब उसले काम गरिरहेको छैन, तपाईले उसलाई आफ्नो परिवारको लागि खाना पकाएको वा केही कथा पढिरहेको पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईं उहाँसँग जडान गर्न सक्नुहुन्छ twitter.
V V चरणहरू COVID-१ During को बखत तपाईंको व्यवसाय राख्नका लागि
शानदार ग्राहक सment्लग्नता with को साथ तपाइँको ब्रान्डको विकास फोस्टर